Batyhola uSpotify ngokushiya iiyunithi zokugcina ezingenamsebenzi | IPhone iindaba
Batyhola uSpotify ngokushiya iiyunithi ezingasetyenziswanga ngenxa yedatha ebhaliweyo
Abasebenzisi besicelo seekhompyuter ze Spotify Bakhalaze ngelithi wohlwaya iikhompyuter zakho ngokuqhubeka ubhala idatha enkulu kwii-hard drive zakhonaxa isicelo simisiwe. Izikhalazo zaqala kwiinyanga ezintlanu ezidlulileyo, xa abasebenzisi baqala ukuthumela ingxaki kwi- iforamu yokuxhasa ukusuka kwiSpotify, kwi Reddit nakwezinye iiwebhusayithi kunye neenkonzo. Isikhalazo sibanga ukuba isicelo seSpotify sigcina idatha engcolileyo kwiidrive zayo ezinzima xa siqhuba ngasemva, sibhala i-10GB rhoqo kwimizuzwana engama-40.
ArsTechnicaEmva kokufunda amakhulu ezikhalazo ezivela kubasebenzisi beSpofity, wakwazi ukuphinda avelise ingxaki kwii-Macs ezininzi esebenzisa inguqulelo yamva nje yesicelo sedesktop senkonzo yokusasaza umculo esetyenziswa kakhulu kwihlabathi. Ukubhalwa kwedatha kwenzeka nokuba iingoma zilungiselelwe ukuba zigcinwe apha ekhaya okanye umculo uyadlala. Kwaye, okubi ngakumbi, oku kubhalwa kwedatha ngokuqhubekayo inokunciphisa ixesha lokugcina lokuqhuba, ngakumbi kwii-SSD.
I-Spotify inokunciphisa ixesha lokuqhuba kwiidrive ezinzima
Umsebenzisi weSpotify uPaul Miller uthelekisa le ngxaki neoyile yeemoto eyohlwaya injini yemoto:
Esi sisiphene "esikhulu" esichaphazela amawakawaka abasebenzisi ngoku. Ukuba, umzekelo, ioyile kaCastrol inciphise ixesha lokuphila kwenjini yakho ukusuka kwiminyaka emihlanu ukuya kwelishumi, ndicinga ukuba uninzi lwabasebenzisi beluya kufuna ukwazi kwaye inyani leyo "kufuneka" ixelwe.
U-Spotify uphendule kwi-ArsTechnica esithi «naziphi na iinkxalabo ezinokubakho sele zilungisiwe»Kwinguqulo 1.0.42 yesicelo, ingxelo esele ikho. Ukuba awukahlaziywa, yenze ngokukhawuleza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Batyhola uSpotify ngokushiya iiyunithi ezingasetyenziswanga ngenxa yedatha ebhaliweyo
Ividiyo ebukhoma iza kwi-Instagram kungekudala
I-Adventures eSebenzayo kaSherlock Holmes-Simahla yasimahla kwiXesha eliMiselweyo